မည်သည့် firmware ကို Apple လက်မှတ်ထိုးနေသည်ကိုစစ်ဆေးရန်။ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
အိုင်ပက်ဒ်သတင်း | | iOS 8, NOTICIAS
လူအများစုကအရာရာကိုနောက်ဆုံးအချိန်အထိထားလေ့ရှိသည်။ တခါတလေငါကံကောင်းတယ်၊ တစ်ခါတလေလည်းငါမဟုတ်ဘူး။ ပျင်းရိမှုအရှိဆုံးတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏ iDevices ကို scratch မှပြန်ယူရန်ဖြစ်သည် အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအတော်လေးနှေးကွေးနေသည်နောက်ဆုံး iOS ဗားရှင်းအကြားဒေါင်းလုပ်လုပ်သည် iTunes သည် iDevice ကိုပြန်လည်ရယူပြီးကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်သော application အားလုံးကိုကူးယူရသည်။ ၀ ီစီများနှင့်ပုလွေများကြားတွင်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုက်မဲမှုနှင့်အတူသွားကြသည်။
Firmware ကိုလက်မှတ်ထိုးတော့မယ့်အချိန်ကို Apple ဘယ်တော့မှသတိမပေးတော့ဘူး ဗားရှင်းအသစ်ထုတ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများ၌ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကံကောင်းမနေကိုကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားခြင်းကိုအမြဲတစေထိခိုက်စေသည်။ iOS ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားချင်သောသူများအတွက်မူယခင်ဗားရှင်းသို့ပြန်သွားနိုင်ခြင်းရှိမရှိမသိဘဲ Jailbreak ကိုအရှုံးမပေးဘဲအသုံးပြုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုရှိသည်။ iOS ၏မူကွဲအားလုံး Apple သည်ယခုအချိန်တွင်လက်မှတ်ထိုးနေသည်.
ဤနည်းအားဖြင့်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း၊ jailbreak ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အရင် iOS version ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောချက်ချင်းဥပမာသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်ဆေးလိုသောပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ရုံသာဖြစ်သည်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲနှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သည့်ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုကြည့်ရှုရန် ၀ က်ဘ် http // ipsw.me / 8.1 သို့ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ယခု iOS ၏နောက်ဆုံးမူကွဲသည် ၈.၁.၁ ဖြစ်ပြီး Jailbreak ကိုမထောက်ပံ့ပါသို့သော်ယခုနောက်ဆုံးဗားရှင်းစတင်ပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ရှိနေသော်လည်းဤဝက်ဘ်ဆိုက်မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ Jailbreak ကိုခံစားရန်အတွက် iOS 8.1 ကိုအရင် version သို့ပြန်သွားနိုင်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သေးသည်။ IPSW.me ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမိနစ်အနည်းငယ်တိုင်းမွမ်းမံပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်သူဖော်ပြသောသတင်းအချက်အလက်များသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီနီးပါးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် IFTTT အသုံးပြုသူများဖြစ်လျှင်၊ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကြောင်းကြားရန် iOS ၏မူကွဲအမျိုးမျိုး၏လက်မှတ်တွင်အပြောင်းအလဲတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အတွက်စာရွက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 8 » ဘယ်လိုအက်ပလီကေးရှင်းကလက်မှတ်ထိုးနေသည်ဆိုတာကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲ
ကိုယ့်အခြားနေ့ကငါသည်ဤသံသယရှိခဲ့ပါတယ်။ iOS6ပါတဲ့ iPhone 8.0 ကို ၀ ယ်လိုက်ပြီး jailbreak မလုပ်ခင် iOS 8.1 သို့ upload လုပ်နိုင်မလား (Apple ကလက်မှတ်ထိုးနေသေးလားဆိုတာမသိခဲ့ပါ) နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ လူအများပြောဆိုသောအမေရိကန်ဖိုရမ်များမှရေးသားချက်များသည်အနည်းဆုံးနာရီအနည်းငယ်အကြာအထိ၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စွန့်စားမှုနှင့်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သော်လည်းအနာဂတ်အတွက်ဤအချက်အလက်ကိုရရှိခြင်းသည်မထိခိုက်ပါ။
Ignacio you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှ IFTTT မှသတိပေးချက်များဖန်တီးခြင်းသည်အလွန်အသုံး ၀ င်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားသည်နှင့်ချက်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြလိမ့်မည်။
iPad mini retina2ကို iOS 8.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာ firmware ကိုဒေါင်းလုပ်ချသော်လည်း IDEVICE နှင့်မကိုက်ညီသော firmware အသိပေးစာကိုကျွန်တော်အမြဲရရှိခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone5နှင့်ထပ်တူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ipsw အမြောက်အများကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်အထိတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သီအိုရီအရ၎င်းသည်အတိအကျပုံစံမဟုတ်ပါ။
မင်းရဲ့မော်ဒယ် ipsw ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြီလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ မော်ဒယ်တစ်ခုတည်းနှင့်မတူညီသောစာမျက်နှာများမှ ၄ ခုတည်ရှိပြီး ၄ င်းတို့သည် firmware ပြproblemsနာများ၊ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ရင်အမှားအယွင်းကိုငါဆက်ရှာနေသည်။
ကောင်းပြီ၊ Apple က iOS 8.1 ကိုဆက်ပြီးလက်မှတ်ထိုးသည်။ သင်၏အိုင်ပက်ပုံစံသည်သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေသော Firmware နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိသင်စစ်ဆေးပြီးပြီလား။ မော်ဒယ်တော်တော်များများရှိတယ်။
ထိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပင် iPad မော်ဒယ်များ၏ firmware ကိုသင် download လုပ်နိုင်သည်။
ငါတစ် ဦး က 5th GEN IPOD ရှိခဲ့ထိုကဲ့သို့သောမိတ်ဆွေများ။ AND သင်စာမကျြနှာအပေါ်သင်ပြန်လည်သုံးသပ်ထံမှ https://ipsw.me/ Apple က iOS 9.2.1 သို့ SIGNING လုပ်ခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပြသည်။ ကျွန်ုပ်၏ iPod ကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုသော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်မစွန့်စားလိုပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်အားကူညီနိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ !!
iOS အတွက် third-party keyboard များအဘယ်ကြောင့်သတ်ဖြတ်ခြင်းမရှိသနည်း။
Virtual Reality မျက်မှန်များသည် iPhone6အတွက် Spatial interaction နှင့်အတူကြေညာခဲ့သည်